हेडक्वार्टरको निर्णयले ओली-प्रचण्डको पार्टीभित्र खैलाबैला, क-कसलाई लाग्यो झट्का ?  Hamrosandesh.com
हेडक्वार्टरको निर्णयले ओली-प्रचण्डको पार्टीभित्र खैलाबैला, क-कसलाई लाग्यो झट्का ?
काठमाडौं ,साउन २५ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को हेडक्वार्टर धुम्बाराहीमा रहने भएको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले धुम्बाराहीमा केन्द्रीय कार्यालय र पेरिसडाँडामा जनवर्गीय संगठनहरुको कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको हो ।